Ilay Fahafatesana Tsy Voafaritry ny Fotoana An’ilay Mpanao Gazety Ethiopiana Tany An-tsesitany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Janoary 2018 15:37 GMT
Araka ny tahiry avy amin'ny Komity fiarovana ny mpanao gazety, nitarika mpanao gazety marobe hiala ny firenena ny governemanta Ethiopiana, tsy mba tahaka ny firenena hafa rehetra aty Afrika.
Matetika mandositra ny fireneny ireo mpanao gazety Ethiopiana noho ny tahotra higadra sy ny herisetra. Talohan'ny fifidianana tamin'ny taona 2016 tany Ethiopia, nisambotra sy niampanga mpanao gazety sy bilaogera tamin'ny heloka fampihorohoroana, indraindray tamin'ny alàlan'ny lahatsoratr'izy ireo, na ny fanehoan-kevitra nalefan'izy ireo tao amin'ny Facebook na Twitter ny antokon'ny fitondrana, Manda Revolisionera Demaokratikam-bahoaka Ethiopiana (EPRDF). Mety hiatrika fandrahonana sy fampijaliana ivelan'ny fitsarana ihany koa izy ireo.
Ho an'i Ibrahim, nahazatra azy ny fandrahonana tahaka izany. Efa ho folo taona talohan'ny nialàny ny tanindrazany, nosamborina sy nodarohan'ny polisy nandritra ny korontana taorian'ny fifidianana Ethiopiana tamin'ny taona 2005 izy. Nilaza ny namany fa nampijaly mafy azy ny polisy ka nahatonga ny tongony iray nalemy tanteraka.
Talohan'ny nifindrany tany Kenya, niaina fiainana feno fahaiza-mamorona tao Addis Ababa, renivohitr'i Ethiopia, toerana nahaterahany tamin'ny Septambra 1977 i Ibrahim. Taorian'ny nahazoany mari-pahaizana tao amin'ny Departemantan'ny Siansa Politika, Oniversite Addis Ababa tamin'ny taona 2001, nampianatra taranja fahaiza-miaina ho an'ny mpianatry ny lisea izy ary nohajain'ny mpianany noho ny asa mafy nataony sy ny fanoloran-tenany.
Nahazo laza koa izy amin'ny maha mpanao gazety mahaleotena be mpanaja sy misandratra azy. Izy no tale lefitry ny famoahana tao amin'ny iray amin'ireo gazety ara-panatanjahantena lehibe indrindra ao Ethiopia izay nahatonga azy ho feo mitsikera ny asa fanaovan-gazety ara-panatanjahantena Ethiopiana. Izy no kintana tamin'ny fandaharana tamin'ny radio momba ny fanatanjahan-tena nandroso haingana tao Addis Ababa. Ankoatra ny asany mahomby amin'ny maha mpanao gazety ara-panatanjahantena azy, mpanao famakafakana tao amin'ny Addis Guday, gazetibokim-baovao mpivoaka isan-kerinandro izay efa tsy misy intsony ihany koa izy. Taorian'io, niasa ho tale lefitry ny famoahana tao ihany koa izy.
Tamin'ny 3 Janoary 2018, tapa-bolana taorian'ny nanoratany izany fanamarihana maminany izany tao amin'ny Facebook, nodimandry tany Nairobi, Kenya i Ibrahim Shafi. Tsy nampahafantarina ny daholobe ny antony nahafatesany, saingy nilaza ireo namany akaiky any Kenya fa nisy fiantraikany ratsy tamin'ny fahasalamany ny fiainana an-tsesitany. Nilaza kosa ny sasany fa mety nisy ifandraisany tamin'ny fahafatesany ny ratra nahazo azy tamin'ny teo am-pelatanan'ny polisy Ethiopiana.
Nahangona vola 10.000 dolara Amerikana mahery tao anatin'ny andro vitsivitsy ho an'ny renin'i Ibrahim, izay mijanona ao Addis Abab ny tranonkala fanangonam-bola fahatsiarovana noforonina tao amin'ny GoFundMe.